सत्ता गठबन्धनले टुंग्यायो राष्ट्रिय सभाको भागबण्डा, कसलाई कति सिट ? – kalikadainik.com
सत्ता गठबन्धनले टुंग्यायो राष्ट्रिय सभाको भागबण्डा, कसलाई कति सिट ?
सोमबार, पौष १९, २०७८ | १३:१९:५२ |
काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनले आसन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचनको १९ सिटमा भागबण्डा गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको सिट भागबण्डा गर्न सोमबार बिहान सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताको बैठक बालुवाटारमा बसेको हो।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसलाई ६, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको भागमा ५–५, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)लाई २ र जनमोर्चालाई १ सिट दिने सहमति भएको छ। २० सांसद चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरी बिदा हुन लागेकाले उम्मेदवार उठाउन भागबण्डा गरिएको हो।
संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार एमालेका ८, कांग्रेसका ३, एकीकृत समाजवादी र माओवादीका ४–४ गरी १९ जना सांसदको कार्यकाल सकिएकाले नयाँ निर्वाचित गर्नका लागि मतदान हुँदैछ। बालुवाटार स्रोतका अनुसार २० सिटमध्ये एमालेबाट रिक्त हुने ८ सिटमध्ये कांग्रेसलाई ३, माओवादी केन्द्रलाई २,एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई १/१ सिट हुनेगरी बाँडफाँड गरेको हो।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने एक जना सांसद्को पनि अवधि सकिन लागेको छ। उनीहरु सबैको फागुन २१ गते कार्यकाल समाप्त हुँदैछ। सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सहभागी छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेविरुद्ध गठबन्धन गरेरै उनीहरु निर्वाचनमा जाने तयारी गरेका छन्। माघ १२ गते राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि मंगलबार उम्मेदवारी दर्ताको निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका रहेको छ।
प्रदेससभा सदस्य र स्थानीत तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखले मतदान गर्ने छन्। प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ र स्थानीय तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार १८ हुन्छ। २०७५ असार ४ गते भएको गोला प्रथाद्वारा चारवर्षे पदावधि कायम भएका सदस्यको पदावधि सकिन लागेको हो। स्थायी सदन भएकाले राष्ट्रियसभाका एकतिहाई सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुनेछ। माथिल्लो सदनका रूपमा रहेको ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि छ वर्षको हुन्छ।